नवराजको प्रेमिका सुस्मा ठकुरी पहिलो पटक बोलीन्, “पहिले कुराकानी हुन्थ्यो फागुनदेखि मसंग कुरा भएको थिएन” !!! – Sunaulopana
नवराजको प्रेमिका सुस्मा ठकुरी पहिलो पटक बोलीन्, “पहिले कुराकानी हुन्थ्यो फागुनदेखि मसंग कुरा भएको थिएन” !!!
नवराजको प्रेमिका सुस्मा ठकुरी पहिलो पटक बोलीन्,
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०७:५८
काठमाडौं : सामाजिक सञ्जालमा अहिले नवराज विकको प्रेमीका भनिएकी युवती भन्दै एउटा अडियो सार्वजनिक भएको छ । जसमा सुरुमा एक महिला बोल्छिन्, जसमा उनी युवतीको आमा भनेर सम्बोधन गरिएको छ । फोन गर्ने ब्यक्तिले तपाईको छोरी पनि संगै छन् ? भनेर प्रश्न गर्छन, ति महिलाले संगै छ भनेर फोन दिएको बुझ्न सकिन्छ । अनि नवराजको प्रेमिका भनिएकी युवती परिचय दिएर केही प्रश्न गरिएको छ । जसमा उनीहरुको प्रेम सम्बन्धका बारेमा प्रश्न गरेका छन् ।
उनले जवाफमा पहिलो आफुसँग संधै कुराकानी हुने, नवराजको घरमा पनि आफु गएर बसेको ति युवतीले स्वीकार गरेको सुनिन्छ । उनले भनेकी छन्, पहिलो कुराकानी हुन्थ्यो, तर गएको फागुन देखि उ संग कुरा भएको थिएन । मलाई राम्रो लागेन त्यही भएर छोडेको हो। हिँजो पनि म संग कुरा भएन । उ वाहिर आएको थियो भन्ने थाहा पाएकी थिए, म घरमै टिभी हेरेर बसेकी थिए । गाउँमा हल्ला भएको पनि थाहा पाए ।
तर मेरो उ संग पछिल्लो समय कुनै सम्बन्ध थिएन ति युवतीले फोनमा भनेको सुनिन्छ । उनले आफु युवकको घरमा पनि गएर बसेको पनि स्वीकार गरेकी छन् । छोटो कुराकानीमा उनले नवराजसंग चिनजान भएको र चिनजानको क्रम फेसवुकवाट सुरु भएको वताएकी छन् । तर यो अडियोका आधिकारीकता भने छैन । वास्तवमै उनै युवती हुन् वा होइनन् त्यसको पुष्टि यो अडियोवाट गर्न सकिदैन । नवराजको प्रेमिका भनेर दा’वी गरिएकी युवती अहिले प्र’हरी हिरासतमा छन् । यो अडियो सुन्दा घट्ना भएको भोलीपल्टको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । किनकी युवतीले हिँजो भनेर बोलेकी छन् ।
सोती घट्नाका बारेमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो काम शुरु गरेको छ । समितिले आज पी’डित पक्षसँग भेटघाट गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै सो समितिले भेरी नगरपालिका–४ का सञ्जु भनिने सञ्जीव विकको श’व स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा पुगेर अध्ययन गरेको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जीतेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
भारतमा एक नेपालीको केस मुण्डन गरियो
समितिले बिहीबारदेखि यहाँ आएर काम थालेको हो । उक्त घ,ट,ना,मा जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का २१ वर्षीय नवराज विक, सञ्जु विक र गणेश बुढा तथा भेरी –११ का लोकेन्द्र सुनार र चौरजहारीका टीकाराम सुनारको शव यसअघि नै फेला परिसकेको छ । भेरी –११ का गोविन्द शाही अझै बेु’पत्ता छन् ।
समितिलाई दलित अधिकारकर्मी सङ्घ र सङ्गठनले निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै छ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको अधिकारकर्मी पार्वती विकले बताउनुभयो । उक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै संयोजक बस्नेतले सरकारले दिएको कार्यादेशका आधारमा काम हुने बताउनुभयो । उहाँले तोकिएको समयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याइनेसमेत जानकारी दिए ।
“मानवीयता,समानता र जातीय भेदभाव एवं मुक्तिकोलागि अब बलिदान गर्ने समय आएन र??”
कार्यकक्षमै बेहोस भएका प्रहरी नायब निरीक्षक टेक बहादुर माझीको मृत्यु !!!
११ जनामा कोरोना संक्रमण, मृत्यु संख्या शून्य
‘ज्यान मार्नेसम्मको खेल खेलियो, जनताको ऋणी भएको छु’ : वडा अध्यक्ष पदम थापा मगर
यूरोपमा फैलिरहेको ‘मन्की पोक्स’ कस्तो रोग ?
सात वर्षअघि नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको बताउने युवतीको घरमा प्रहरी
रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट ठुलोकान्छा तामाङले पाए टिकट
रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाको अध्यक्षमा तामाङको दाबेदार एक नम्बरमा
सुनापति गाउँपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न,सिङ्गो पालिका एकलौटी जित्ने ठोकुवा
सुनापति ४ को वडा अध्यक्ष पदकोलागी बिजय तामाङको दाबेदार